TomTom na-enye map oge ndụ niile na mmalite ya | Akụkọ akụrụngwa
GPS dị ka ọ na-apụ apụ, n'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na ọtụtụ ndị ọrụ nwere ama, nke na-agụnye ohere a, yana oge ọ bụla na nnukwu ihuenyo nke na-eme ka ọhụụ ha nwee ọhụụ, GPS sitere na ụlọ ọrụ ndị a ma ama dị ka TomTom adịghị dị ugbu a, ọkachasị n'ọhịa ọkachamara, ebe arụmọrụ ya, ịdị mfe ya na mmelite ya mere ka ọ bụrụ ngwa ọrụ dị mkpa. Ka ọ were, TomTom amalitela nkwalite eserese n'efu n'efu maka TomTom Start nso, ma na mbipute 42, dị ka 52 na 62. Dị ka ị maara nke ọma, naanị ọdịiche dị n'etiti ngwaọrụ ndị a bụ nha ihuenyo ihuenyo.
Yabụ, 42 nwere ihuenyo anọ nke anụ ọhịa, 52 na ihuenyo ise nke anụ ọhịa na 62 na ihuenyo nke anụ ọhịa isii, ịbụ onye ikpeazụ nhọrọ kasị pụta ìhè na-akwọ ụgbọala, sentimita anọ nwere ike ịbụ obere mkpụmkpụ na GPS, nke ọrụ ya bụ ịkwado igodo, ghara ịhapụ anyị ka anyị kpuo ìsì. Na mgbakwunye, ngwaọrụ atọ a nwere njikwa ọsọ na akara ngosi echekwara ha, ka anyị ghara ịgabiga ngwa ngwa n'oge ọ bụla, onye njem njem zuru oke maka ndị na-etinye ọtụtụ awa n'okporo ụzọ ma ọ bụ ndị chọrọ ịkwọ ụgbọala na-enweghị nchekasị ma ọ bụ tufuo batrị site na ama gị.
TomTom ekwuola na nnọkọ mkparịta ụka gara aga na ọ nwere maapụ kachasị ezi na ahịa, ọ na-agụnye ngwa dịka igwefoto ndị a na-agụ ihe ịrịba ama ma gosipụta oke ọsọ, mana a na-akwụ ụgwọ ọrụ ahụ, n'agbanyeghị gụnyere ọnwa atọ nke ụdị n'efu. Ihe omuma ohuru bu na ihe ato a gha enwe ngbanwe ngbasa ndu nke ndu efu, ogagh adi nma. Ndụ batrị dị na ngwaọrụ TomTom bụ ihe enweghị mgbagha, yana ịdịte aka ya na nkenke ya, yabụ ma ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịzụ TomTom, ma eleghị anya ọ bụ oge iji ohere nke nkwado ha nke maapụ n'efu.
Still amabeghị etu esi melite TomTom maka n'efu?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » GPS » TomTom na-enye map oge ndụ niile na ntanetị ya